War cusub oo ka soo baxay Dhismaha Dekeda Garacad & Guddiga oo ku dhawaaqay war farxad leh.
GAALKACYO(P-TIMES) – Warar dheeraad ah ayay soo saareen Enjineerada gacanta ku haya dhismaha dekeda Garacad ee ay isku tashiga ku dhisanayaan Shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaana gobalka Mudug, waxayna sheegeen dadka gacanta ku hayaa in ay dhici karto in dhawaan ay kusoo xirtaan Doonyuhu si KMG ah.
Enjineerada gacanta ku haya dhismaha ayaa sheegay in hadda Badda gudaha loo galay masaafo dhan 155Mitir, taas oo ladoonayo in la gaaro 1.55KM, waana mid kamid ah dekedaha ugu waa weyn ee gudaha Soomaaliya.
Guddiga ayaa sheegay in marka gudaha loo galo Biyaha badda Masaafo dhan 250Mitir ay ka dhigan tahay in Gaadiidka badda ay kusoo xiran karaan Marsadan si KMG ah, taas oo ka dhigan in guul wanaagsan la gaaray.
In masaafo dhan 155Mitir bilo kooban gudahood lagu gaaro ayaa ka dhigan in ay muujinayso yadadiilada guddigu ay horey u sheegeen ee kuwajahan in August 2021-ka, lasoo afjari doono dhismaha guud ee Dekedan.
Garacad ayaa noqon doonta magaalo muhiim ka noqonaysa gobalka Geeska Afrika, waxaana Dekedan ay adeegyo baaxad weyn gaarsiin doontaa wadamada Geeska kuyaala, gaar ahaana Suuqa Barriga Afrika ugu weyn ee Itoobiya oo ah meesha ugu badan ee xooga la saarayo waqtigan.
Shirkad laga leeyahay dalka Turkiga oo qaadatay Qandaraaska ayaa sheegtay in ay guul-wanaagsan ka filayso dhismaha Dekedan in lagu dhameeyo waqtigeeda, taas oo ay sheegtay in ay dhankeeda farxad gooni ah u tahay.